Villa Somalia oo war ka soo saartay weerarkii ay Al-Shabaab ku qadaeen saldhigga Mareykanka ee Manda Bay – Hornafrik Media Network
Villa Somalia oo war ka soo saartay weerarkii ay Al-Shabaab ku qadaeen saldhigga Mareykanka ee Manda Bay
Madaxtooyada Soomaaliya ayaa qoraal ay caawa soo saartay ku sheegtay inay caalamka kula biireyso cambaareynta weerarkii kooda Al-Shabaab ay saaka ku qaadeen saldhigga ciidamada Mareykanka iyo kuwa Kenya ay ku leeyihiin deegaanka Manda Bay gobolka Lamu ee dalka Kenya.
“Weerarka fashilmay ee ururka argagixiso ee sii burburaya ee Al-Shabaab, kaasi oo lala maaganaa shaqaalaha iyo hantida difaaca ma dib u dhigi doono dadaallada wadajirka ah ee lagu ciribtirayo kuwa diidan nabadda iyo xasiloonida gobolka” Ayaa lagu yiri qoraalka Villa Soamlia.
Qoraalka ayaa lagu sheegay in dowladda Soomaaliya ay ciidamada Kenya iyo taliska AFRICOM ee Mareykanka ku amaaneyso sida fudud ee ay isaga caabiyeen weerarkaas, khasaaraha xooganna u gaarsiiyeen ururka Al-Shabaab.
“Dowladda Soomaaliya waxay taageero buuxda u xaqiijineysaa dadaallada socoda ee gobolka looga ciribtirayo argagixisada, waxayna sii wadi doontaa inay saaxiibada gobolka iyo caalamka kala shaqeyso in nabad iyo baraare laga helo gobolka iyo dunidaba” Ayaa lagu yiri qoraalka.
Al-Shabaab ayaa bayaan ay soo saartay caawa ku sheegatay in weerarkaas ay “ku dishay 17 askari oo Mareykan ah iyo 9 Kenyan ah, kuna burburisay 7 diyaaradood iyo in ka badan 5 gaari oo kuwa ciidamada ah.”
Taliska ciidamada Mareykanka Afrika ee AFRICOM ayaa sheegay in war-saxaafadeedyo dhowr ah oo Al-Shabaab ay ka soo saartay dhacdadaas ay yihiin kuwa lagu buun-buuninayo xaaladda amniga ee saldhigga. “Dhaqankan waa mid caadi u ah ururkan argagixisada ah.” Ayaa lagu yiri qoraalka AFRICOM.
“Al-Shabaab waxay doortaan been, cadaadis iyo inay awood u adeegsadaan sare u qaadidda sumcaddooda, si ay u abuuran warar been abuur ah,” waxaa sidaas yiri agaasimaha howl-gallada AFRICOM Major General William Gayler.
Al-Shabaab oo sheegtay in ciidamo badan ay Kenya iyo Mareykanka uga dileen saldhiggii ay ku weerareen
Al-Shabaab oo mar kale weeraray saldhig ay leeyihiin ciidamada Kenya